Global Voices teny Malagasy » “Atsimon’ny Atsimo”: Mozika Malalaka – Fivoriana! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jolay 2014 18:41 GMT 1	 · Mpanoratra David Escalante Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Meksika, Mediam-bahoaka, Mozika, Rising Voices
Ny fivorianay dia feno fahamatorana nefa misy fotoana malalaka ny mitsiky, nandritra ny fotoana niresahanay momba ny Fiarahamonina Rizoma , sehatra ifarimbonana fandraketam-peo/sary, fanitsiana sy famokarana ny feo naraiketina ahitana votoaty ara-tsosialy na ara-piarahamonina.
Ahitana ireo ekipa mpikambana maromaro namelona ny tetikasa ao amin'ny sary. Avy eo ankavia miankavanana no ahitana an'i Raúl Escaroz , vahiny tamin'ny fivoriana. Tamin'ny alalan'ny asany ao amin'ny fampiraisana tambajotra, no nahafahanay nampifanohy zavatra sasany tapatapaka, indrindra teo amin'ny fananganana fifanatonana fiarahamonina ifaharan'ny tetikasa. Eo andaniny i Iván Chan Cortazar , manampahaizana momba ny fambolena sy ny tontolo iainana, hanampy anay amin'ny fandaminana ny lalana hodiavina rehefa hiainga avy amin'ny Fiarahamonina Rizoma (studio/tranonay) izahay ka hitsidika ireo fiarahamonina isan-karazany ary handrakitra feo/sary miaraka amin'ireo mpitendry mozika. Nandinika momba ireo lalana sy fotoana ilaina hahatongavana any amin'ireo fiarahamonina ireo izahay. Manana fiara antonontonony izy, ary azo antoka fa hanala azy tokoa izahay mandritra ny dia.
Eo andaniny kosa no misy ilay mpikambana mpiaramiasa hafa, Lorenzo Itzá Ek . Programera i Lore, izay mora entanina amin'ny asa ara-tsosialy sy ara-piarahamonina, ary miaraka aminy no nandrafetanay tetikady hizarana ny vaovaonay mba havitrika sy hipaka any amin'ny olona maro araka izay tratra. Nanapa-kevitra hanangona ny tetikady ampiasain'ireo mpitendry mozika tsirairay avy ihany koa izahay, ho fomba iray hamoronana bokikely mety hanampy anay rehetra. Eo akaikiny eo i Guillermo “Memo” Gorocica , mpiasa sosialy sy mpitendry mozika. Izy no hisahana ny famoronana feon-kira izay mety hanampy ireo mpitendry mozika mila fototra azony velarina. Ary manaraka azy ny tenako, David , mampifandray ireo mpitendry mozika sy ny fitarihana atrikasa mikasika ny fampiasana teknolojian'ny fandraisam-peo/sary kosa no asako.
Farany, miandry fitaovana teknolojika izahay mba hanombohana ny fandraisam-peo/sary sy atrikasa. Handray anjara voalohany ny “Ruido Social” (Feo Sosialy), mpiangaly mozika avy ao amin'ny fiarahamonina antsoina hoe Komchen  ao Mérida. Ary hohamafisinay atsy ho atsy ny fiarahamiasa amin'ireo mpiangaly mozika roa hafa.
* Ity lahatsoratra voalohany ity dia natokana ho fahatsiarovana an'i MC Maya Cima Atte: Hitombo ao aminay rehetra ny voa nafafinao ( Your seed will only grow in all of us) :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/16/61844/
 nahazo vatsy 2014 : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2014/06/04/congratulations-to-the-2014-rising-voices-grantees/
 Fiarahamonina Rizoma: https://www.facebook.com/RizomaComunitario
 David: https://mg.globalvoices.org https://www.facebook.com/d.escalanteeuan
 Hitombo ao aminay rehetra ny voa nafafinao (: http://bit.ly/1oJkuaM